निश्चलले किन सेयर गरेनन् स्वस्तिमाको गीत ? (हेर्नुहोस भिडियो) - Everest Media News
Home भिडियो निश्चलले किन सेयर गरेनन् स्वस्तिमाको गीत ? (हेर्नुहोस भिडियो)
अन्य फिल्मका गीत सेयर गर्ने निश्चलले स्वस्तिमाको गीत चाहिं किन सेयर गरेनन् ? के स्वस्तिमा नाचेको गीत निश्चललाई मन परेन ? या उनले श्रीमतीको गीत आफ्नो वालमा सेयर गर्न आवश्यक ठानेनन् ? निश्चलले स्वस्तिमाको गीत सेयर नगर्दा यतिबेला फिल्मी सर्कलमा भने विभिन्न प्रश्न सृजना भएका छन् । आखिर स्वस्तिमा नाचेको गीत निश्चलले किन सेयर गरेनन् ?
‘जय भोले’को गीत हेर्नुस् :
‘मेरो इन्गेजमेन्ट भएको छैन’ : परमिता राना…..
चङ्गामा उडे प्रियंका-आयुषमानदेखि परमितासम्म…..